Uma ufuna isabelo sebhajethi e-Phuket, endaweni ye-Kata Beach, kodwa ngesikhathi esifanayo sifuna ukuhlala ehhotela elikhululekile eduze kolwandle, ngakho-ke njengendlela efanele kufanele siphakamise ukucabangela "I-Beach Resort Kata".
Indawo, ulwazi jikelele, isithombe
I-Eazy Resort Kata Beach 3 * itholakala ngamamitha angu-600 ukusuka ku-Kata Beach. Ibhishi lomphakathi eliseduzane lingatholakala kumaminithi angu-10. Ugu lolwandle lwePatong lungatholakala ngetekisi. Isikhathi sokuhamba cishe imizuzu engu-20. Indlela esuka ePhukethu yezindiza eya ehhotela izothatha cishe ihora elilodwa.
"I-Beach Resort le-Kata" iyihhotela elincane lanamuhla. Yakhelwe ngo-2012 futhi ihlanganisa indawo yamamitha ayizi-4 000 square. Amamitha. Ihotele cishe ayinayo insimu yayo, nokho kukhona echibini elincane elingaphandle elinomhlabathi welanga. Kodwa-ke, izivakashi azivami ukuzisebenzisa, ngoba nje ibanga elide lingu-beach enkulu.
Ihhotela line-cafe, ibha, i-laundry, i-Wi-Fi yamahhala. Izivakashi zingasebenzisa i-iron, i-ironing board ne-hairdryer, uma kunesidingo. Sicela wazi ukuthi idiphozi ye $ 50 izokhokhiswa lapho ufika.
Ihhotela linamakamelo angu-27 esigaba se-deluxe. Zonke zivulekile futhi zihlotshiswe ngendlela enhle. Ifenisha nemishini ngaphakathi kuzo zisha. Wonke amafulethi ane-TV flat, isiqandisini, umoya we-air conditioning, ephephile, ithala, indawo yokugezela. Ukuhlanza nokushintsha kwamathawula kwenziwa nsuku zonke.
I-Eazy Resort Kata Beach 3 *: izibuyekezo zezivakashi zaseRussia
Abahambayo abaningi ngesikhathi sokuhlela uhambo oluphesheya bazama ukuqoqa ulwazi oluningi mayelana nendawo abazophumula kuyo. Ikakhulukazi, liphathelene nehhotela. Phela, ngisho noma uzibheka njengesigaba sabantu abaphansi, ngokuqinisekile uzobe uthanda ukuhlala ezimweni ezikhululekile futhi ubale ukudla okuhle kanye nenkonzo enhle kakhulu. Usizo lokubheka ngokwengeziwe mayelana neqiniso elithile ngehhotela elithile, ngokusho kwabavakashi abanolwazi, kukuvumela ukuba wazi kabanzi ngezibuyekezo zalabo asebevele benethuba lokuma endaweni eyodwa noma kwenye. Phela, ezindabeni zabo zangaphambili izivakashi azikhulumi nje ngalokho abazithandayo ehotela ethile, kodwa futhi ngalokho abangazange baneliseke ngakho. Ukuze ulondoloze isikhathi sakho, siphakamisa ukuthi uzijwayele ukubuyekezwa okujwayelekile kwezivakashi zaseRussia osanda kuhlala eThailand futhi wahlala e-Izi Resort Kata Beach. Ngaso leso sikhathi sizobona, ukuthi ihotela elinikeziwe iningi labantu abahambayo lihlala lijabule kakhulu. Bayaqaphela ukuthi kuyahambisana nesigaba saso. Kodwa sifunda ngakho konke ngokuningiliziwe.
Isikhwama sokuphila se-Eazy Resort Kata Beach 3 * (Phuket, Kata). Ngokusho kwabo, babethanda amakamelo avulekile, ahlanzekile, ahlotshisiwe. Izivakashi ziqaphele ukuthi indlu yakho inakho konke okudingayo: I-TV yama-plasma eneziteshi ezimbili zokukhuluma isiRashiya, isiqandisini esikhulu, isethi yokwenza itiye kanye nekhofi (izikhwama zetiyi, ikhofi, kanye noshukela kanye nosawoti ziletha zonke izinsuku), i-electronic ephephile, ephephile Isimo sezulu, indlu yokugezela ne-plumbing entsha. Uma udinga isambatho sokwabelana ngezinwele, ungayithatha mahhala ngesikhathi sokwamukela. Abavakashi baqaphele ukuthi kusukela wonke amakamelo asezingeni lokuqala, azikho amabhaluni lapha. Kodwa-ke, kunezitezi ngefenisha. Kusuka emakamelweni angomakhelwane nasemigwaqweni bahlukaniswe ngamahlukaniso kanye nezihlahla. Ngendlela, zonke izindlu zendawo lapha zihlukene ngokuphuma emgwaqeni. Abagibeli abaqashiwe baxwayisa ukuthi uma uthanda ukulala isikhathi eside, kuhle ukucela ukuthi ukubeke ekamelweni elingaphandle kwekhishi lehhotela. Iqiniso liwukuthi umsebenzi uqala lapha ngehora leshlanu ekuseni. Umsindo owenziwe abasebenzi ekhishini ngabasebenzi ungakuvusa.
Ngokuvamile, konke kusebenza ngaphandle kokuphazanyiswa. Kodwa-ke, uma kukhona ukuphazamiseka, abasebenzi basehhotela bazokwenza ngokushesha ukulungisa ukungasebenzi. Futhi abantu bakithi baxwayisa ngokuthi uma usuka endlini, ugesi uvaliwe. Ngakho qaphela, ushiye ukudla okuphakade efrijini.
Njengoba kuboniswe ngabahambi, leli hotele linokufinyelela kwi-inthanethi engenazintambo mahhala kuyo yonke indawo. Noma kunjalo, ijubane le-Wi-Fi liphansi kakhulu, futhi ngezinye izikhathi liyinkinga kakhulu ukusebenzisa. Uma ufuna ukwazi ukuhlala ku-intanethi njalo, ngeseluleko sabavakashi abanolwazi, thola i-SIM khadi kusuka kwelinye lama-opharetha weselula wendawo ngokuxhuma iphakheji ye-Inthanethi kuyo. Ngeke kube nemali enkulu.
Ngokuqondene nalokhu, ngokuvamile, izivakashi ze-Eazy Resort Kata Beach 3 * (Phuket, Kata Beach) zazingekho izimfuno ezikhethekile kumsikazi. Ngakho, ngokusho kwezivakashi, amakamelo abo ahlanzwa nsuku zonke. Amathawula netineni zokulala zashintshwa njalo. Ngandlela-thile, nsuku zonke akugcini nje ukugeza, kepha amathawula asebhishi abuyekeziwe , okuletha ngqo ezindlini. Ngaphezu kwalokho, njengoba ukusetshenziswa kudlulisela ukuhlinzeka kwamanzi okuphuza, izikhwama zetiyi kanye nekhofi nemikhiqizo yokuhlanzeka emzimbeni wokugezela. Sicela uqaphele ukuthi ezinye izimenywa emazwini abo zikhomba iqiniso lokuthi ngokuvamile izinsikazi ziza ukuhlanza ekuseni kakhulu (ngezinye izikhathi ezizungeze eziyisishiyagalombili ekuseni). Ngakho-ke, uma ufuna ukulala isikhathi eside, ungakhohlwa ukufaka uphawu "Ungaphazamisi" emnyango ukuze kungabikho lutho oluphazamisa ukuphumula kwakho.
Izindleko zokuhlala kuleli hotele zihlanganisa kwasekuseni kuphela. Badlula ekamelweni elincane lokudlela kusuka ezintandathu kuya kweshumi ekuseni. Kunezintafula eziningana zezivakashi, kanye namatafula okudla kanye nezitsha. Ukudla kwasekuseni, ngokusho kwezivakashi, nsuku zonke kuyafana. Ngakho, ekuseni ungakwazi ukunambitha amaqanda ngezinhlobonhlobo ezahlukene, isobho, ushizi, ama-sausage, isobho, imifino, izithelo, ama-pastries, ijusi, itiye, ikhofi. Abanye bethu bakithi bakhononda ngokukhetha okungafani kakhulu kwezitsha kanye nemenyu ephindaphinda ekuseni. Kodwa-ke, ngokusho kwabo, kwakungenzeka njalo ngezikhathi ezithile ukuba badle ukudla kwasekuseni kwelinye lamathilomu eseduze nehhotela.
Ngokuphathelene nenyanga nezindawo zokudla, eduze kwe "Izi Resort Kata Beach" kunezindawo zokudla eziningana lapho wonke umuntu angathola ukudla ukunambitheka kwabo. Ngakho, lapha ungakwazi ukunambitha kokubili ukudla kukazwelonke Thai, kanye izitsha evamile Russian cuisine noma Italian. Ngaphezu kwalokho, eduze kwehhotela kukhona izitolo eziningana kanye nemakethe lapho ungathenga khona izithelo, imifino, izilwane zasolwandle, njll.
Njengoba kuphawuliwe abaholi bamaholide, kusukela ehhotela i-Eazy Resort Kata Beach 3 *, izithombe ezingabonakala kulesi sihloko, ku-Beach Beach eliseduzane se-Beach kungatholakala ngamaminithi angu-10 kuphela ngokuhamba kancane. Ulwandle lapha, ngokusho kwezivakashi, luzolile. Isihlabathi esisogwini asijulile, sihlanzekile. Le ndawo, ngokweminingi, inkulu yokuphumula nezingane. Eduze ogwini kukhona amakhofu amaningi nemigoqo lapho ungadla khona noma uphuze.
Uma ukhetha, ungakwazi futhi ukuhamba uye eKaron Beach. Ngaphambi kwakhe, uhamba ngezinyanga ezingu-20-25.
Ihhotela Phrinta Kamala Resort Indawo abantu abajwayele 4 * (Phuket, Thailand): incazelo kanye nezithombe
Ihhotela Magic Sunrise Club 4 * (Israyeli, u-Eilat): izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela yokwenza isiphequluli "i-Internet Explorer" ngokuzenzakalelayo: amathiphu asebenzayo